Huawei P30 Pro, fiheverana voalohany amin'ny avo lenta miaraka amin'ny zoom bebe kokoa | Androidsis
Androany ireo maodely farany ambony roa an'ny Huawei, ny P30 ary ny P30 Pro. Ireo fitaovana ireo no farany naniry ny hanohizan'ny orinasa sinoa mazava fa eto izy mba hifaninana amin'ny tsara indrindra amin'ny tsena, hamindra ny Huawei Mate 20 Pro raha ny amin'ny tampon'ny katalaoginy.
Eo am-pelatanantsika ny Huawei P30 Pro vaovao ary holazainay aminao ny zavatra fahatsapanay voalohany nandinika ity fitaovana mahavariana ity. Mijanona aminay ary fantaro izay rehetra tsy maintsy holazainay aminao momba ny Huawei P30 Pro vaovao.
Toy ny mahazatra, anio dia mihaona eto isika fifandraisana voalohany amin'ny fitaovana, ny fanapahan-kevitro voalohany momba ny maha-marina na tsia ny mampiavaka azy ary koa ny fampisehoana nomeny ahy aorian'ny ora fiasana voalohany. Na izany aza, toy ny mahazatra, dia hanolotra anao fanadihadiana lalindalina kokoa ary koa fitsapana ny fakan-tsary ataon'izy ireo ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, noho izany dia tsy tokony ho hadinonao ny Androidsis ary ny fantsontsika YouTube, aiza izahay no hitandrina anao amin'ny zava-drehetra. Noho izany, mijanona miaraka aminay ary fantaro izay ny fiheverana voalohany navelan'ity Huawei P30 Pro antsika ity.
1 Fitaovana sy famolavolana, endrika voalohany
2 Fitaovana goavambe sy efijery tsara
3 Vaovao momba ny Huawei P30 Pro sy ny hafa tsy eo
4 Ny fakantsary tsara indrindra sy ny bateria tsara indrindra eny an-tsena?
Fitaovana sy famolavolana, endrika voalohany
Amin'ity tranga ity dia tsy namela toerana be loatra amin'ny saina i Huawei, dia nahitana endrika mitovy amin'ny Huawei Mate 20, indrindra eo aloha, satria Mazava ho azy ny fametrahana volomaso hanomezana antsika «drop» izay mifantoka tsara ary izany dia miafara amin'ny famelana ny rafitra "lunar" izay misy ireo fantsona vaovao an'ny Samsung Galaxy ary misy aza izany any amin'ireo fantsona sasany an'ny Huawei mihitsy. Na izany aza, safidy manokana io, ary raha omena safidy aho dia toy ny gout aho fa tsy "notch" sy "lunar". Amin'ity tranga ity, Huawei dia nampiasa vera miolaka indray ho an'ny sisiny izay mahatonga azy hahazo aina fatratra.
Size: X X 158 73 8,4 MG
lanja: Gramin'ny 192
Any aoriana dia misy vera atolotra ao alokaloka efatra: Mainty; Mena sy takariva ary fotsy mangatsiaka. Tena nahomby ny lokon'ny Huawei P30 Pro izay tsy isalasalana fa lavitra ny tsy ho voamariky. Na izany aza, ny fandaminana ny telo fakan-tsary Hafa mihitsy noho ilay teo amin'ny tandavan'i Mate tamin'io "kianja" io. Ankehitriny dia manana fandaharana mitsangana izahay ary mandritra izany dia mampahatsiahy anay ohatra ny Xiaomi Mi 9. Mikasika ny kalitaon'ny fitaovana, ny terminal dia mahazo aina araka izay antenaina.
Fitaovana goavambe sy efijery tsara
Huawei P30 Pro famaritana ara-teknika
modely P30 Pro
Operating System Android 9.0 Pie miaraka amin'ny EMUI 9.1 ho toy ny sosona
efijery 6.47-inch OLED miaraka amin'ny famaha Full HD + 2.340 x 1.080 teboka ary 19.5: 9 ratio
Tahiry anatiny 128/256/512 GB (Azo zahana amin'ny microSD)
Fakan-tsary aoriana 40 MP misy vava f / 1.6 + 20 MP zoro 120º misy vavahady f / 2.2 + 8 MP misy vava f / 3.4 + Sensor Huawei TOF
Fakan-tsary aloha MP 32 miaraka amina f / 2.0 aperture
Fitaovana hafa Fitaovana fantsom-paritra natsangana tao amin'ny efijery NFC Face unlock
bateria 4.200 mAh miaraka amin'ny SuperCharge 40W
lafiny X X 158 73 8.4 MG
lanja Gramin'ny 139
vidiny 949 euros
Hitanay tao amin'ny Huawei P30 ireo toetra ara-teknika izay tsy mamela anay tsy hiraharaha fa tsy mitondra anay be loatra avy any amin'ny faritra fampiononana. Na dia manao veloma ny fankasitrahana amin'ny tarehy avo lenta aza isika, Huawei dia manohy miloka amin'ny mpamaky ny rantsan-tànana an-efijery izay nanome valiny tsara toy izao tao amin'ny Huawei Mate 20 Pro, toy ny tranga misy amin'ny mpikirakira. HiSilicon Kirin 980, ilay ampiasain'ny orinasa sinoa ao amin'ny Huawei Mate 20.
Amin'ity tranga ity dia manomboka amin'ny a Fampisehoana OLED izay mbola tsy fantatsika ny mpanamboatra azy, ary koa ny fanoherana ny rano Fanamarinana IP68. Amin'ny ambaratonga fitehirizana sy RAM dia manana biby tena izy isika, RAM 8 GB ary tahiry 128/256/512 GB fa hivelatra amin'ny alàlan'ny rafitry ny Memory Nano Memory Card izy ireo izay notsikeraina nefa ny orinasan'ny sinoa manizingizina ny fampalaza azy, hiafara amin'ny fahazoana azy io? Mbola ho hita io. Amin'ny haavon'ny lozisialy, ny orinasa dia miloka farany amin'ny Android 9 Pie sy ny EMUI 9 customization layer, iray amin'ireo tena tian'ny mpampiasa azy nefa tsy ankanavaka amin'ny resaka fampisehoana.
Vaovao momba ny Huawei P30 Pro sy ny hafa tsy eo
Ny zavatra voalohany ataontsika veloma ao amin'ity Huawei P30 Pro ity dia ny fifandraisana an-tariby 3,5mm, izay ananan'ny Huawei P20 Pro, saingy tsy te hanohitra ny fomba famongorana ity seranana ity i Huawei. Ho an'izany Manana seranana USB C 3.1 tokana izahay, tsy manana Jack 3,5mm izahay. Hitanay noho izany ny fivoaran'ny Huawei P20 Pro tena voajanahary, manararaotra ny fankatoavana ny "drop" napetraka eo anoloana ny Huawei Mate 20 izay tian'ny mpampiasa loatra tamin'ny fitrandrahana ny efijery ary nampiarahina tamin'ny curve efijery amin'ny sisiny.
Amin'ny lafiny iray, vitsy ny fiasa vaovao ananantsika amin'ny haavon'ny fanampiana ara-batana, efijery iray 6,47-inch OLED ary Full HD + vahaolana (2340 x 1080 teboka), Betsaka ny tsaho fa ny Huawei dia mety nanala ny LG tamin'ny fanamboarana ireo takelaka ireo, ary ny marina dia mitovy amin'ny an'ny natolotry ny Samsung amin'ny terminal hafa toa ny iPhone izy ireo, na izany aza, mbola tsy mitana ny vaovao marina ao nisintona izany. Izay ahitantsika fampiasam-bola bebe kokoa dia ao amin'ny fakantsary indrindra, izay mendrika ny fizarana manokana ato amin'ity lahatsoratra ity momba ny fahatsapana voalohany.
Ny fakantsary tsara indrindra sy ny bateria tsara indrindra eny an-tsena?
Ny Huawei P30 Pro dia manolotra fakan-tsary misy module an'ny sensor nentin-drazana telo sy sensor ToF Izany dia tonga hamonjy ny fakantsary mahafinaritra izay efa natolotry ny Huawei Mate 20 Pro volana vitsivitsy lasa izay. Iray amin'ireo fiasa malaza indrindra ny 10x Zoom-ny sy ny fampiasana ny rafitra fifantohana laser. izany dia hanome valiny tena tsara amin'ny fepetra rehetra. Ireo no mampiavaka manokana izay ho hitantsika ao amin'ny fakan-tsarin'ny Huawei P30 Pro.
Zoro somary malalaka, 20 MP ary f / 2,2
Fakan-tsary lehibe, 40 MP ary f / 1,6
Zozy 10x hybrid (5x optika ary 5x nomerika), 8 MP ary f / 3,4
Mandao anao izahay lisitry ny sary haingana fa afaka naka tamin'ny terminal izahay, izay manolotra ihany koa a Fakan-tsary eo aloha 32 MP vavahady f / 2.0 afaka manolotra maodely tsara tarehy sy tsara ho an'ny olona tia tena.
Fenitra amin'ny alina
Mandritra izany fotoana izany, ao anatiny dia misy bateria tsy latsaky ny 4.200 mAh, Raha raisina ny valiny tsara natolotry ny Huawei Mate 20 Pro, sarotra ho antsika ny tsy hino fa hiankohoka amin'izay mety ho fizakantena tsara indrindra eo amin'ny tsenan'ny finday isika, tsy maintsy hizaha toetra azy isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Huawei P30 Pro, fiheverana voalohany amin'ny avo lenta miaraka amin'ny zoom kokoa
Ny WhatsApp beta vaovao dia manafina ny safidy hamaha ny fampiharana amin'ny alàlan'ny rantsantanana